Nongedzo yekuziva maitiro ekugona Export zvigadzirwa muPrestaShop | ECommerce nhau
Maitiro ekutengesa kunze zvigadzirwa muPrestaShop
Kana uchivhura chitoro chepamhepo muPrestaShop Izvo zvinodikanwa kuti utore mune mamwe akakosha ruzivo kuitira kuti uwane zvakanyanya pachikuva ichi.
Semuenzaniso, chinhu chakakosha kwazvo mune izvi chine chekuita nacho ziva kutumira kunze zvigadzirwa muPrestaShop, chiito icho chakakosha kuita kuti ukwanise kugadzira kopi yekuchengetedza, kana futi kuitira kuendesa zvigadzirwa zvese kune chimwe chitoro chepamhepo, nezvimwe.
Aya makesi anotipa muenzaniso wekuti nei zvichidikanwa kwazvo kuziva maitiro ekuendesa kunze zvigadzirwa zvese zvechitoro chepamhepo chakagadzirwa mu PrestaShop kune CSV faira. Tevere isu ticha taura nhanho uye mirairo yeiyi maitiro, kuitira kuti vashandisi vagone kuzviita pasina kuwanda kwakanyanya.
Kutanga, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti PrestaShop ine bhatani rekutengesa kunze uko riri pamusoro pezita rezvigadzirwa (muCatalog> Zvigadzirwa), izvo zvingaite kunge zvakakwana kugadzirisa mubvunzo nezve kunze kwenyika kwezvinyorwa.
Nekudaro, bhatani iri haribudise kunze data rese rechigadzirwa, sezvo richisiya zvimwe zvakakosha, senge: tsananguro yezvinhu, mubatanidzwa, mabrand, nezvimwe.
Naizvozvo, imwe nzira inofanirwa kuitwa kusanganisa zvinhu izvi, maitiro atinozoongorora kubva kuchitoro PrestaShop 1.6 kana .11 uye kumusoro.
1 Kukosha kwemamojuru muPrestashop
2 Gadzira iyo CSV faira
3 Chii chinoitika kana iyo faira yatovepo mudhairekitori iro mushandisi arikuenda?
4 Kuiswa kwemoja kuburitsa mafaera muPrestaShop
5 / Maitiro ekuisa module mu Prestashop?
5.1 Kuisirwa otomatiki
5.2 Chinyorwa module yekuisa
6 Rudzi rweMamojuru mu Prestashop
7 Module ye Prestashop 1.6
7.1 Chigadzirwa mutengesi kunze kwekumisikidza sarudzo muPrestaShop
8 Chigadzirwa mutengesi kunze kwekumisikidza sarudzo muPrestaShop
9 Module yekuburitsa zvigadzirwa mu CSV fomati muPrestaShop
10 MySQL uye matambudziko kuburitsa mune CSV fomati
10.1 Chii chinonzi SQL Manager ye
Kukosha kwemamojuru muPrestashop
Imwe yei main maturusi iyo inogona kushandiswa mu Prestashop yemagetsi chikuva, Ine chekuita nekumisikidzwa kwemamodule, ayo akateedzana ezviridzwa izvo zvatinogona kushandisa kuita yedu dura rewebhu kunyatsojeka uye kuzivikanwa pakati penharaunda yevashandisi, vanogona kufarira izvo zvatinopa pane zvakataurwa webhusaiti.
Apa ndipo pane iyo basa rekutanga rePrestashop module.
Semuenzaniso, izvi zvinoshanda kuti zvikwanise kugadzira mamwe maratidziro esarudzo, semablog, rumwe ruzivo rwakananga kana kumwe kuwedzera kwekuchengetedza.
Zvimwechetezvo, zvinotibvumidzawo kubatana nemamwe masevhisi (ayo anogona kumiririra nzira dzakasiyana dzekubhadhara kuti zvive nyore kune vatengi kubhadhara ma invoice) kana mamwe mabasa akakosha, akadai se: poindi masisitimu evatengi kana kuratidza wongororo yezvinyorwa.
Naizvozvo iyo module system iyo inogona kuiswa kubva ku Prestashop chikuva, inoita kuti zvive nyore kune yega yega chitoro pane ino saiti kuve yakasarudzika uye iine zvese zvinotarisirwa nemutengi pasina kuzvizadza nezvinhu zvisina kufarira vatengi.
Gadzira iyo CSV faira
Nhanho yekutanga inofanirwa kuve ne kugadzira CSV faira iine data rese rinodikanwa kuti ukwanise kuendesa zvigadzirwa mune imwe prestaShop kuisirwa, maitiro anoitwa seinotevera:
Kutanga iwe unofanirwa kuwedzera iyo faira (AdminProductsController.php) mune inotevera PrestaShop yekuisa nzira yemushandisi, uyezve nyora iyo AdminProductsController.
/ kudarika / vatongi / admin /
Chii chinoitika kana iyo faira yatovepo mudhairekitori iro mushandisi arikuenda?
Kana iyo faira yatovepo mudhairekitori imwe ichaenda, izvi zvinogona kuitika nekuti template inogona kunge yatogadzira iyo faira kuti inyorwe AdminProductsController.php.
Muchiitiko chemamiriro ezvinhu aya, chii chinofanirwa kuitwa zvinotevera, ndiko kuwedzera zvataurwa zvisati zvavharwa kwePHP tag (?>).
Saizvozvo, zvinokurudzirwawo kuita backup kopi yefaira iri usati warigadzirisa, iro rinogona kubatsira zvikuru kana maitiro acho asingashande, nekuti neiyi nzira iwe une backup yekuyedza zvakare pasina kuomesa hupenyu hwako. Kuitira kuti iwe iva neiyo yepakutanga faira yekudzorera pese paunenge uchizvida.
Kuiswa kwemoja kuburitsa mafaera muPrestaShop
Imwe nzira yekuitisa kunze kwemafaira muPrestaShop inogona kunge iri inotevera:
Kutanga, kuiswa kwemo module kunoitwa, uko mune uyu muenzaniso kungave kwePrestaShop vhezheni 1.6. Kuisirwa kuri nyore kwazvo, iwe unongo pinda chete ma module tebhu, kwaunogona kuwana kumisikidza kwayo. Kana izvi zvaitwa, menyu ine dzakasiyana dzekumisikidza sarudzo ichavhura.
Muchikamu chino unofanira kuisa sarudzo ku Yepamberi Maparamende, iyo inozovhura zvimwe sarudzo uye gare gare iyo ye Export Zvigadzirwa. Chaizvoizvo, iri idanho rekutanga kugona kuwana iko kugadzirisa kweiyo chigadzirwa mutengesi module muPrestaShop.
/ Maitiro ekuisa module mu Prestashop?
Chaizvoizvo, pane maviri makuru mhando dzemamojimendi akasarudzika zvinoenderana nerudzi rwekuisirwa kwaanoenderana.
Yokutanga ndeyekuisa otomatiki, kubva ku "Addons.prestashop.com" Unogona kuikanda pano
Rudzi rwechipiri rwema module rinoenderana neaya anogona kuiswa manyore.
Kana ikatengwa zviri pamutemo mu Prestashop Market Place Chitoro cheSpanish, ma module acho anogona kumisikidzwa zviri nyore kubva kuhofisi yekumashure, iyo inoumbwa nechitoro chekutarisira.
Nenzira iyi, zvinongofanirwa chete kuisa chikamu che "MaModule nemaSevhisi”Kubva pane manejimendi epanongedzo, uye wobva waisa data rakanyoreswa muPrestashop Addons peji.
Kana maitiro aya achinge aitwa, tinogona kuona iyo rondedzero yemamojuru aripo, pamwe neiyo bhatani rekuisa kuti uvawedzere kuchitoro.
Chinyorwa module yekuisa
Kuita yekumisikidza yekumisikidza module pasina kushandisa iyo system yekumisikidza pachayo, mu unoda kuisa iyo faira faira ne ftp iyo kare ichave yatoburitswa mufaira re "modules”Kubva ku Prestashop yedu.
Imwe nzira pachinzvimbo chekushandisa ftp account ndeye kushandisa iyo cPanel mafaera, senge iyo yakapihwa muedu Prestashop Hosting. Chinhu chinotevera kuve kurodha faira iro rinofanirwa kuchimanikidzirwa ku "module" dhairekitori uye wozoisunungura neibhatani rekurudyi, sezvakaratidzwa mumufananidzo unotevera:
Mushure mekunge module yarongedzwa uye isina kuvharwa, tinogona kuenda kuchikamu "MaModule nemaSevhisi muPrestashop", Uye ipapo tichaisa zita remu module iro rinozoonekwa mune rakatarisana runyorwa, ruripo ikozvino kuti isu tiwedzere iro nekungobaya chete.
Rudzi rweMamojuru mu Prestashop
Kune akasiyana akasiyana maModule ayo anogona kushandiswa nekuiswa mukati Prestashop kuwedzera zvirinani maficha uye mashandiro kune edu online chitoro ne prestashop.
Zvimwe zvezvinyanya kukosha zvakanyorwa pazasi:
Iwo maAnalytics nemaBanners Modules
Kutumirwa (MRW, DHL, Envialia, SEUR, nezvimwewo)
Payment magedhi (CECA, Banco Sabadell, Redsys, Cash pakuendesa, PayPal, nezvimwewo)
MaModule eSocial Networks
Module ye Prestashop 1.6
Imwe nzira yekuita faira kutumira kunze muPrestaShop zvinogona kuva zvinotevera:
Kutanga, kuiswa kwemo module kunoitwa, uko mune uyu muenzaniso ingave iri module yePrestaShop vhezheni 1.6. Kuisirwa kuri nyore kwazvo, iwe unongo pinda chete ma module tebhu, kwaunogona kuwana kumisikidza kwayo.
Kana izvi zvangoitwa, menyu ichavhura ine dzakasiyana sarudzo dzekumisikidza.
Chigadzirwa mutengesi kunze kwekumisikidza sarudzo muPrestaShop
Kamwe kana iyo skrini yekumisikidza yemo module yavhurwa, isu tichawana akasiyana masarudzo ekumisikidza emutengesi we zvigadzirwa muPrestaShop, Panguva ino, zvinotevera shanduko uye zvinoshandiswa zvinogona kusarudzwa kuita kumisikidza:
Unogona kusarudza mutauro waunoda kuendesa zvigadzirwa, uchishandisa sarudzo Mutauro. Iyi sarudzo inoshanda inoita kuti hurongwa hwekumisikidza huve nyore kwatiri, nekuti vatengesi vazhinji havana kujairana nekushandisa kweChirungu kana mimwe mitauro, ndosaka zviri nyore kwazvo kuronga kumisikidza muchiSpanish.
Kamwe kana iyo skrini yekumisikidza yemo module yavhurwa, isu tichawana akasiyana masarudzo ekumisikidza emutengesi we zvigadzirwa muPrestaShop.
Panguva ino, zvinotevera shanduko uye zvinoshandiswa zvinogona kusarudzwa kuita kumisikidza:
Iwe unogona kusarudza iyo delimiter iyo yatinoda kushandisa mukutengesa kunze, uchishandisa sarudzo Delimiter.
Iwe unogona zvakare kuratidza kana iwe uchida kuburitsa zvese zvigadzirwa kana kana, kune rumwe rutivi, iwe unongoda chete kutumira izvo zviri kushanda, sarudzo inowanikwa kubva kumapoka maviri anobuda kubva kubhatani Export zvinoshanda zvigadzirwa?
Shure kwaizvozvo, iwe unofanirwa kuratidza kana iwe uchida kutumira kunze zvigadzirwa zvezvikamu zvese kana chete zvechimwe chikamu, mune iripo sarudzo ye Chigadzirwa Chikamu.
Chekupedzisira, iwe unogona zvakare kugadzirisa sarudzo iyo inoratidza kuti mutengo kana kana pasina mutero uchasanganisirwa mukutengesa, iyo inomiririrwa muchikamu che Mutero wemutero unosanganisirwa kana kusasarudzwa.
Pazasi pechidzitiro panogona kuratidzwa idzi sarudzo kune zvakadzama mazwi uye hunhu hwekunze.
Zvizhinji zvezvinhu zvekupedzisira zvinoshandiswa nazvo zvinoenderana neiyi tsika. vanozotengesa zvigadzirwa muPrestaShop. Pazasi pane muenzaniso wekuti kunze kwenyika kunoitwa sei zvichienderana nechimwe chigadzirwa chigadzirwa.
Semuenzaniso, zvigadzirwa zvechikamu che "Vakadzi" zvichaendeswa kunze kwenyika, mune izvo zvigadzirwa zvinoshanda chete zvichasarudzwa, uye kuendesa kunze kuchaitwa nemutengo "usingabhadhari mutero". Uku kumisikidzwa kwaizoenzanisirwa seinotevera:
Chekupedzisira, kana marongero akakodzera asarudzwa, tinya bhatani Tumira kunze, iyo inogadzira iyo CSV faira neruzivo rwezvinhu zvinotumirwa kunze.
Module yekuburitsa zvigadzirwa mu CSV fomati muPrestaShop
Iye zvino tichaongorora mirairo kuti tikwanise tumira zvigadzirwa kunze kwePrestaShop ayo akaiswa muchitoro mu CSV fomati.
Sezvinoonekwa pamusoro, mukumisikidzwa kwemojuru iwe unogona kumisikidza kana iwe uchida kutumira kunze nechimwe chikamu, ndokuti, kana iwe uchida kutumira zvigadzirwa mumutauro wakatarwa, kutemerwa kana mhando yezvigadzirwa zvaunoda kutumira kunze, nezvimwe. .
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kutumira kunze kunoitwa nekutadza mu CSV, asi zvakare inokutendera iwe kuti usarudze zvakataurwa kunze kwenyika mune imwe fomati, semuenzaniso muTXT Mufananidzo unotevera unoratidza sarudzo idzi dziripo kugadzirisa.
MySQL uye matambudziko kuburitsa mune CSV fomati
Kumwe kwekukanganisa uko kutengeswa kunze kweiyo CSV fomati kunogona kuve nayo muPrestaShop inyaya yekuti ingangoda kuziva mysql, Zvakanaka, mibvunzo yese inogadzirwa kubva pachirongwa ichi, zvine musoro kufunga nezvekuti iro PrestaShop dhatabhesi iri mukati MySQL.
Usati waburitsa kunze kuburikidza mysql, Izvo zvinokwanisika kuyedza kana sarudzo dzakasimbiswa nekutadza dzichitishandira, kana kana, kune rumwe rutivi, zvichidikanwa kuti uzvishandure kuti zviite maitiro aya. Nenzira iyi, kana matafura edata akaonekwa, mune mazhinji eaya, angave zvigadzirwa, zvikamu kana hunhu, nezvimwe, zvakateedzana mabhatani anoonekwa anotibvumidza kuita zvinotevera maitiro:
Export bhatani: Iri bhatani rinokutendera kuti utorere zvakananga data retafura iro rinoratidzwa kune CSV, chete iine zvinokanganisa kuti hakusi kuburitsa kwakakwana kweese data rinogona, nekuti rinogona kutumira tafura yezvigadzirwa, asi pasina rondedzero. yechigadzirwa chimwe nechimwe.
Ratidza bhatani remubvunzo weSQL: Iyi sarudzo inotiratidza iyo SQL query ichaitwa kana bhatani rekutumira radzvanywa.
Tumira bhatani kuSQL Manager: Iri bhatani rinokutendera kuti utumire kunze kwemubvunzo unoitwa kana iwe ukadzvanya sarudzo kuratidza SQL query kune SQL maneja.
Muzviitiko zvakati wandei, idzi sarudzo dzinogona kunge dzisina kukwana kutora mukana wezvose zvinotumirwa kunze, saka zvinodikanwa kuti ushande nenzira yepamusoro mune SQL maneja. Mune vhezheni 1.6 yePrestaShop, maneja weSQL anogona kuwanikwa mu "Advanced Parameter + SQL Manager" uye mushanduro 1.7, inogona kuwanikwa mu "Advanced Parameter + Dhatabhesi + SQL Manager".
Chii chinonzi SQL Manager ye
Chaizvoizvo, iyo SQL maneja maneja wedhatabhesi iyo iwe yaunogona kuita mibvunzo yeiyi uye chengeta ivo kuti vaite iyo paunoda. Nekumhanya iyi mibvunzo, unogona kurodha pasi CSV faira inoguma mushure mekuuraya kwapera.
Kuti uite mubvunzo mukati memaneja weSQL, iwe unofanirwa kungobaya bhatani "Wedzera mutsva weSQL mubvunzo". Kuita izvi kuchavhura bhokisi rinotevera:
Kutenda ku Prestashop Iyo inotiratidza matafura uye hunhu hwedatabhesi, izvi zvinotibvumidza isu kuti tiwedzere zvinhu izvi zvakananga kumubvunzo, sezvakaratidzwa mumufananidzo unotevera:
Sezvaunogona kufungidzira, chakanakisa chinhu chekuita kubata nemabatiro nemaitiro aya kuita, nekuti nenzira iyi chete ndipo hunyanzvi huchawanikwa tumira zvigadzirwa kunze kwePrestaShop senyanzvi.
Iyo miganho yekutengesa kunze inoenderana kubva pano, pane manejimendi uye nehunyanzvi hwevashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Maitiro ekutengesa kunze zvigadzirwa muPrestaShop
Iko kukosha kwemaSME ekuva newebsite
Puntronic wongororo uye inowanzo bvunzwa mibvunzo